Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Da'da Bilowga Duulimaadka Zero-Emission
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • News • Technology
Iyada oo dareenka sii kordhaya ee dhammaan warshadaha si loogu dhaqmo isbeddelka cimilada loona yareeyo qiiqa CO2 ee adduunka, suurtagalnimada ciyaartoy cusub ee tikniyoolajiyadda duulista weligeed ma weynaanin.
Isbedelka cimilada oo sii socda, tallaabooyinka ay hadda qorsheeyeen warshadaha duulista ayaan ku filnaan doonin. Khariidad cusub oo khariidado 40 ah oo rajo gelineysa bilowga duurka cusub ee duulimaadyada waara.
Dulmarka guud ee khariidadaha Aero Lab Sustainable 40 bilow ah oo rajo leh, ku ururinta duulimaadyo waara oo ku kala yaal afar goobood oo tiknoolajiyadeed ah: Shidaalka Duulista Joogtada ah (SAF), Soo -saaridda Korontada, Hydrogen, iyo Laf -dhabar Dijital ah.
Waxa kale oo ay fiirineysaa maalgashiga raasamaalka caalamiga ah ee tiknoolajiyadda eber-ka, beerta oo si weyn u soo jiidatay lixdii sano ee la soo dhaafay, laakiin ilaa hadda waxay ka xishoonaysay inay ku xirnaato waaxda duulista, gaar ahaan marka ay timaaddo qaybaha adag sida hydrogen .
Lab Aero Lab oo waara ayaa diiradda saareysa dardargelinta bilowga wuxuuna la -talin ku bilaabay qayb kasta oo lagu tilmaamay daraasaddan tan iyo markii la bilaabay Febraayo 2021. Qaar ka mid ah khubarada ugu caansan dhammaan qaybaha kala duwan ee duulimaadyada ayaa durba ku biirey lataliyeyaal.
Stephan Uhrenbacher, aasaasaha iyo maamulaha Shaybaarka Aero Sustainable: “Bilaabashadii ugu heersareysay ee aerospace -ka dhawaanahan waxay sameyneysay safarka hawada iyo tagaasida hawada ee magaalooyinka. In kasta oo badeecadani ay ka dhigto ka bixitaanka walxaha duulaya oo qancinaya rabitaanka aadanaha, taksiyada hawada ama dad badan oo meel dhigaa midna ma xalliyaan dhibaatada haysata duulimaadyada ganacsiga: Duulimaadku wuxuu u baahan yahay inuu noqdo kaarboon la'aan. Taasina waxay u baahan tahay inay u dhacdo si ka dhakhso badan inta dadka warshaduhu aaminsan yihiin. Waxay u furtaa qol bilow ah si ay u siiso qaybaha diyaaradaha mustaqbalka ama xitaa diyaaradaha oo dhan, laakiin sidoo kale qaababka cusub ee hawlgalka. ”
“Duulimaadku wuxuu si toos ah ugu duulayaa xiisadda cimilada. Weli inta badan wershaduhu waxay diiradda saaraan si isdaba -joog ah u yaraynta ama dib -u -dhigga qiiqa, halkii ay ka tirtiri lahayd gebi ahaanba. Ma jiro wakhti u haray in la qaado habkan kordhinta; saamaynta isbeddelka cimilada ayaa si isa soo taraysa u muuqata oo saamaynaysa mid kasta oo nolol maalmeedkeena ah. Waxaan u baahanahay xalal geesinimo leh oo bixin kara socdaalka hawada ganacsiga ee aan qiiqa lahayn tobanka sano ee soo socda haddii aan rajo ka qabno inaan gaarno yoolalka Heshiiska Paris. Warka fiicani waa in xalalka noocan ahi ay jiraan oo ay matalaan fursad weyn oo suuqa ah, ” ayuu yidhi Paul Eremenko, Maamulaha guud iyo aasaasaha Universal Hydrogen, iyo lataliye Sabiib Aero Sustainable ah. Isaga oo bilaabay, Hydrogen Universal, CTO -kii hore ee Airbus iyo Teknolojiyada United ayaa kaalin firfircoon ka qaadanaya safka hore ee hawshan laftiisa.
Waxaad awoodi kartaa hel daraasadda oo dhan by Sustainable Aero Lab, oo ay ku jirto khariidada bilowga iyo falanqaynta maalgelinta raasamaalka ee farsamada eber-baxa, bogga shaybaarka www.sustainable.aero.